मेयर सरावगी, जसले आफू संक्रमित भएपनि वीरगंजलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाए
आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच दोहोरो झडप
नेपालको पैसा लायन्सले विदेश पठाएको छैन, विदेशबाट भित्र्याएको छ : लायन संजय खेतान
प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार शत्रुघ्न नेपाल र धर्मेन्द्र झालाई दिइने
जसपा पर्साद्धारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला दहन
संसद विघटन विरुद्ध जसपा पर्साद्वारा बृहत जनप्रदर्शन
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग
ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन वीरगंजको अध्यक्षमा बालकृष्ण पोखरेल विजयी
लायन्स क्लबका संस्थापक मेल्बिन जोन्सको जन्मोत्सवको अवसरमा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न
मेरो काम, योग्यता र टिमवर्क नै मेरो जितको आधार हो : सौरभ ज्योति
सोमवार, कार्तिक ३, २०७७ विजयपथ न्यूज डेस्क
अहिलेजस्तो बेला थिएन चैततिर । एक दुइ कोरोना संक्रमित भेटिए पनि ठूलै त्रास हुन्थ्यो ।
गएको ३० चैतमा वीरगंजमा तीन जना मुस्लिम धर्म प्रचारकमा एकैपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा यस्तै त्रास फैलियो ।
स्थानीय प्रशासनले संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै लगत्तै वीरगंज क्षेत्र सिल गरेको थियो ।
त्यतिखेर अन्य जिल्लामा एकै पटक तीन जना वा सोभन्दा बढी संक्रमित नभेटिएकाले महामारी शुरु हुँदाताका नै वीरगंज क्षेत्रलाई कोरोनाको हटस्पटका रूपमा विश्लेषण हुन थाल्यो ।
संक्रमितहरू समुदायमा घुलमिल भइरहेको अफवाह फैलिएपछि माहौल झन् त्रासद हुँदै गयो । हुँदाहुँदै परीक्षणपछि वीरगंज क्षेत्रमै धमाधाम संक्रमित फेला पर्न थाले । शुरुवाती चरणमा जमातीमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा एउटै समुदायमा संक्रमण बढी देखियो ।
सरकारले वीरगंजसँगै देशका अन्य क्षेत्रमा संक्रमित फेला पर्नुअघि नै ११ चैतमा लकडाउन नै घोषणा गरेको थियो । सरकारले सीमा नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्‍यो । तर, खुला सीमानाकाका कारण सीमामा सुरक्षा निकायले निगरानी गर्दा समेत भारतबाट चोरबाटो हुँदै दिनहुँ सयौँ जना नेपाल भित्रिन थाले ।
महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले समेत उपलब्ध स्रोत साधन तथा जनशक्ति परिचालन गर्‍यो । भारतीय नाकाबाट भित्रिनेहरूको स्क्रिनिङ बढाउँदै धमाधम क्वारेन्टाइन निर्माण थालियो ।
तर जनमानसमा संयमता, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकाले महामारी नियन्त्रणमा उतिखेर असफल भएको वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी बताउँछन् ।
उनका अनुसार ७ चैतसम्म कोभिड हस्पिटल बनिसक्नुपर्ने थियो । संक्रमित भेटिन थालेपछि संघीय सरकारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, तीव्र गतिमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि त्यतिले मात्र थेग्न सम्भव थिएन ।
संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर तत्काल अर्को कोभिड अस्पताल बनाउने प्रयास गर्दा दुबै तहका सरकारबाट सहयोग नपाएको महानगर प्रमुख सरावगीले गुनासो पोखे ।
अर्को कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले अनुमति नदिएपछि नारायणी अस्पतालको रेखदेखमा महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट गण्डक हस्पिटलसँग कोभिड अस्पतालकालागि सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ ।
कोभिड अस्पतालमा संक्रमित नअट्ने देखिएपछि महानगरले विद्यालयमै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाएर संक्रमितको व्यवस्थापन तथा उपचार थाल्यो ।
नारायणी अस्पतालमा समेत पीसीआर ल्याब निर्माण पनि सरावगीकै पहलमा सम्भव भएको हो ।
संघीय सरकारले पीसीआर मेसिन पठाएपछि काठमाडौंपछि वीरगंजमा दोस्रो रियल टाइम पीसीआर मेसिन जडान भयो । तर, उतिखेरको लगातार बढेको संक्रमितको संख्याले अवस्था नाजुक भइसकेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीसमेत संक्रमित हुन थाले । लामो लकडाउनले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई छाकै टार्न मुस्किल पर्न थाल्यो ।
त्यस विपद्को घडीमा महानगरले ३६ हजार परिवारलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न बाँडेको प्रमुख सरावगीले बताए ।
उनका अनुसार वीरगंज हेल्प डेस्क राखेर भारतबाट छिरेका १ लाख मानिसको सीमामा स्क्रिनिङ गरियो । महामारी नियन्त्रण अभियानमा सरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीबाट राम्रै सहयोग पाए पनि निजीक्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाए ।
‘महामारीको डर त छँदै थियो तर सुरुवातीका केही दिनसम्म समाजमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने, दूरदूर र छिःछिः गर्ने वातावरणले पनि स्वास्थ्यकर्मी डराएका थिए,’ उनले भने, ‘तैपनि मास ट्रेसिङसँगै निषेधाज्ञा जारी गर्‍यौँ । टेस्ट, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ ।’ तर मास ट्रेसिङका क्रममा विपक्षी दलका स्थानीय नेताले असहयोग गरेपछि यो पूर्णतः सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाकै व्यवस्थापनमा पर्साका अरू पालिकासँगै महोत्तरी, सर्लाही र बाराका संक्रमितको समेत उपचार भएको उनको दाबी छ । तर, स्रोतसाधनसँगै जनशक्ति अभावमा महामारी नियन्त्रणमा थुप्रै चुनौती भोग्नुपरेको र थप चुनौती आउन बाँकी रहेको उनी सुनाउँछन् ।
‘स्वास्थ्यकर्मी, फिजिसियनको अभाव थियो । भेन्टिलेटरको अभाव थियो । हस्पिटलमा उपचार गर्न सम्भव भइरहेको थिएन । त्यसपछि हामीले घरबाटै उपचार सुरु गर्‍यौँ,’ उनले थपे, ‘इम्युनिटी पावर बढाउन हामीले संक्रमितको घरमै औषधि बाँड्यौँ । लक्षण नभएकालाई घरमै उपचार शुरु गर्‍यौँ । तर भेन्टिलेटर नहुँदा धेरै समस्या भयो ।’
सरावगी आफैँ संक्रमित भएपछि कसरी स्थिति सम्हाले ?
काठमाडौंमा नगर विकास कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका महानगरप्रमुख सरावगीलाई एकाएक ज्वरो आयो । मेडिसिटी अस्पतालको फिबर क्लिनिकमा जाँच गराउँदा १५ साउनमा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । ‘ज्वरोले मलाई नराम्ररी च्याप्यो । त्यहाँ भर्ना नभएको भए शायद मेरो ज्यानै जान सक्थ्यो,’ उनले भने ।
उनका बुबा, पत्नीसहित परिवारका अन्य सदस्यमा समेत संक्रमण देखियो । उनी संक्रमित भएको बेला २८ दिन काठमाडौंमै बसे । तर, महामारीले कहर मच्चाएको बेला उनले स्थिति कसरी सम्हाले ? ‘त्यही बेला एकैपटक महानगरका धेरै कर्मचारी पनि संक्रमित भएपछि हात चलाउने ठाउँ नै थिएन । तैपनि अस्पतालबाट आफ्नो तरिकाले मैले सिस्टमबाट कन्ट्रोल गरिरहेकै थिएँ । जे सक्यौँ गर्‍यौँ,’ उनले भने ।
संक्रमित भइसकेपछि संचारमाध्यममा मेयरको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै भ्रम छर्दा परिवारलाई मानसिक तनाव भएको उनले अनुभव सुनाए । त्यसैबेला संक्रमणकै कारण उनले आफ्ना बुबालाई गुमाएपछि उनलाई झनै पीडा थपियो । तैपनि उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा कुनै कसर बाँकी नराखेको उनी सुनाउँछन् । संक्रमणमुक्त भएयतासमेत शरीरमा अझै समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘एकदमै कमजोर महसुस गर्दै छु । धेरै बोल्न पनि सक्दिनँ । जनतामा एउटा भ्रम छ कि एकपटक कोरोना भइसकेपछि अर्को पटक सर्दैन । त्यो भ्रम चिर्न जरुरी छ । सबैले अब जीवनशैली र अनुशासन मेन्टेन गर्न जरुरी छ,’ उनले थपे ।
‘१५ र २० दिनपछि फेरि निषेधाज्ञा हुन्छ’
निषेधाज्ञा हटेयता वीरगंजको अवस्था अझै भयावह भएको प्रमुख सरावगीको भनाइ छ । ‘जुन तरिकाले लकडाउन र निषेधाज्ञापछि खुला स्थिति छ, यो एकदमै भयावह छ । छिट्टै तपाईंले सुन्नुहुन्छ कि यहाँ फेरि ठूलै संख्यामा संक्रमित बढेका छन् भनेर,’ सरावगीले भने, ‘जिन्दगीभर लकडाउन गरेर पनि मिल्दैन । काम गरेर खाने व्यक्तिलाई धेरै गाह्रो हुँदोरहेछ । फेरि हामी एक्सनमा जान्छौँ । हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । १५ र २० दिनपछि फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्छाैँ ।’
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रणमा महानगरपालिकालाई सहयोग नगरेको भन्दै उनी रुष्ट छन् । संघीय सरकारलाई महामारी नियन्त्रणमा १७ करोड रुपैँया खर्च भएको फेहरिस्त पठाउँदा मुस्किलले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग पाएको र प्रदेश सरकारबाट राहत वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँबाहेक केही सहयोग नपाएको उनले बताए । कोभिड महामारीको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने उनको धारणा छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदासमेत महामारी नियन्त्रणमा पूर्ण सफलता पाउन नसकेको उनको दाबी छ ।
‘महामारीसम्बन्धी कानुनलाई क्लियर राख्नुपर्छ । सबैको आ-आफ्नो भूमिका तोकिनुपर्छ । संघले आफ्नै तरिकाले जाने, प्रदेशले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने,’ सरावगीले थपे, ‘तर, स्थानीय सरकारकै टाउकोमा सबैले गल्ती थुपार्ने जुन धन्धा ग¥यो, त्यो पटक्कै राम्रो होइन । सहयोग नगर्ने हो भने संघले भन्नुप¥यो कि विकास छोडेर सबै बजेट यसमै खर्च गर । नभए हामीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गर्न नपाओस् ।’ विपन्न र बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि अझै तीनै तहका सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक ३, २०७७, ०२:२९:१६
लायन्स क्लब अफ वीरगंज ग्रिन क्याम्पस र सेन्ट्रल सिटीको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
आइतवार, कार्तिक २, २०७७ विजयपथ न्यूज डेस्क
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा वीरगंजको घन्टाघर चौकमा दिप प्रज्वलन
आइतवार, आश्विन २५, २०७७ विजयपथ न्यूज डेस्क
संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच दोहोरो झडप बुधवार, माघ २८, २०७७
उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन प्रजिअ तामाङको आग्रह विजयपथ न्यूज डेस्क
नेशनल मेडिकल कलेजद्वारा ३ सय बेड क्षमताको कोरोना अस्पताल सञ्चालन विजयपथ न्यूज डेस्क
नारायणी अस्पतालकाे लापरवाहीले युवककाे मृत्यु भएको आरोप विजयपथ न्यूज डेस्क
© Bijay Path Daily - 2021 All rights reserved.